एटिएममा पैसा निकाल्दै गरेकी महिलालाई लुटेका लुटेराले हाँस्दै फिर्ता गरे लुटेको पैसा (भिडियो सहित) – Medianp
एटिएममा पैसा निकाल्दै गरेकी महिलालाई लुटेका लुटेराले हाँस्दै फिर्ता गरे लुटेको पैसा (भिडियो सहित)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन ३०, २०७५१४:४४
काठमाडौँ । एटिममा पैसा निकाल्न गएकी एक महिलाको पैसा लुटेका लुटेराले पुन पैसा फिर्ता दिएको घटना यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । चीनको हेयुआन शहरमा भएको यो घटनालाई लिएर धेरैले लुटेराको प्रशंसा गरिरहेका छन् ।
सिसिटीभि फुटेजबाट निकालिएको यो भिडियोमा आइसीबीसी बैंकको एटिएमबाट पैसा निकाल्दै गरेको देखिएको छ । जब महिलाले एटिएमबाट पैसा निकाल्दै गर्दा आएका एक लुटेरा त्यहाँ आउँछन् । चक्कु देखाएर महिलाको सबै पैसा लुट्छन् । महिलाले डराएर सबै पैसा लुटेरालाई दिन्छिन् ।
उनले २५०० युआन एटिएम बाट निकालेकी थिइन् । सबै पैसा लिएको लुटेराले फेरि ती महिलालाई एटिएममा कति पैसा छ भनेर हेर्न समेत पठाउँछ । एटिएममा एक पैसा पनि बाँकी नभएको थाहा पाएपछि लुटेराले महिलाको सबै पैसा फिर्ता दिएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
किन एब्बाको हत्याको बदला लिन न्यूजिल्याण्डमा गरियो नरसंहार ? आखिर को हुन् ११ वर्षीय एब्बा ?
साबुनको रङ फरक फरक भएपनि किन सेतै आउँछ फिँज ? जान्नुस ,वैज्ञानिक कारण
छोटो कपडा लगाएको कारण यी युवतीलाई लगाइयो विमान चढ्नमा रोक
जीवनमा कसरी खुसी प्राप्त गर्ने ? जान्नुस् , यी २० रोचक तथ्यहरु
किन बनाइयो मुक्तिनाथमा १०८ धारा ? यस्तो छ वास्तविक कारण
रसायनिक कारखाना विस्फोट, ६४ जनाको मृत्यु
अमेरिका समर्थित फौज: अन्तिम आधार क्षेत्र गुमाएसँगै आईएस सिरियामा पराजित